Muvhuro 31 Chivabvu 2021
Kalendari Mune kaleidoscope-yakafanana nefashoni, iyi ndiyo kalenda ine yakafukidza mifananidzo yekucheka yakatorwa mifananidzo ine multicolor pateni. Dhizaini yayo nemapende emhando iyo inogona kuve yakagadziriswa uye yakasarudzika nekungochinjisa kurongeka kwemashidi inoratidza izvo zvinonzwisisika zvekugadzira zveTTT KUWARA. Ample yekunyora nzvimbo inopihwa uye inotongwa mitsara inotora kushanda kune account iyo inoita kuti ive yakakwana sekarenda yechirongwa iwe yaungade kushandisa kushandisa pakushongedza yako pachako nzvimbo.
Svondo 30 Chivabvu 2021
Hembe Kurongedza Iyi sutu yekurongedza inozvitsaura yega fomu yakajairika yekurongedza nekusashandisa chero ipurasitiki chero. Kushandisa marara aripo marara uye maitiro ekugadzira, ichi chigadzirwa hachisi chete chakareruka kugadzira, asiwo chiri nyore kwazvo kurasa, iyo yekutanga zvinhu compost inogadzika pasina. Chigadzirwa chinogona kutanga chakamanikidzwa, uyezve chakazikanwa nekambani yekumaka kuburikidza nekufa-kudura uye kudhinda kuti chigadzire iyo yakasarudzika yakagadzirwa iyo inotaridzika uye inonzwa zvakasiyana uye inonakidza. Aesthetics uye mushandisi interface yakaitwa mukutarisa kwakanyanya sekugadziriswa kwechigadzirwa.
Mugovera 29 Chivabvu 2021
Koni Qadem Hooks chidimbu cheumhizha chine basa rekupikisa rakafemerwa nemhando. Iyo inoumbwa nehuswa hwakasuruvara hwakasarudzika hwekare, hwaishandiswa pamwe chete neQadem (chigaro chekare chemuhosi kumashure) mukutakura gorosi kubva kune mumwe musha kuenda kune imwe.Zvikorekedzo zvakabatanidzwa kune Old Wheat Thresher Board, senzvimbo uye yapera. nepaneri yegirazi kumusoro.
Chishanu 28 Chivabvu 2021
Koni Iyo yakasarudzika console yakagadzirwa nehuni yakarukwa nematombo kupera, inoratidzira yekare yechokwadi kofi grinder iyo inodzokera kunguva yeattoman. A Jordanian kofi inotonhorera (Mabrada) yakagadzirwazve nekukoshwa kuti imire seimwe yemakumbo kune rimwe divi rekonorti pane grress inogara, ichigadzira chidimbu chinonakidza chefoyer kana pekugara.
China 27 Chivabvu 2021
Chiziviso Chemakambani Iyo yakaipa nzvimbo inoshandiswa nekuti inoita kuti vateereri vade kuziva uye kana vangoona kuti Aha nguva, ivo vanobva vangoifarira uye vanoibata nomusoro. Logo chiratidzo ine anogadzira J, M, kamera uye matatu uye akabatanidzwa mune isina kunaka nzvimbo. Sezvo Jae Murphy achiwanzo pikicha vana, masitepisi mahombe, akaumbwa nemazita, uye yakaderera yakaiswa kamera inoratidza kuti vana vanogamuchirwa. Kuburikidza neCorporate Identity dhizaini, iyo yakasarudzika nzvimbo pfungwa kubva kune logo inoenderera mberi kuvandudzwa. Iyo inowedzera chidimbu chitsva pane chinhu chese uye chichiita chirevo, Uncommon View of the Zvaka kujairika, mira chokwadi.
Chitatu 26 Chivabvu 2021
Maviri Seti Iyo Mowraj inzvimbo mbiri-dzevagadziri dzakagadzirirwa kuve nemweya wemadzinza eEgypt nemaGothic. Chimiro chayo chakatorwa kubva kuNewrag, iyo vhezheni yeGibhithe yekushandurwa yakashandurwa kuve Gothic flair pasina kukanganisa hunhu hwedzinza redenga. Dhizaini rakasviba rakasviba rine mutserendende wemuIjipita akanyorwa pamaoko uye pamakumbo pamwe nehupfumi velvet upholstery inowanikwa nemabhagi uye kudhonza mhete zvichizvipa iyo medieval yakakandwa sechitarisiko cheGothic.
Opx2 Kuisirwa Optic Chishanu 18 Chikumi
Vivit Collection Mhete Uye Mhete China 17 Chikumi
Catzz Katsi Mubhedha Chitatu 16 Chikumi
Kalendari Hembe Kurongedza Koni Koni Chiziviso Chemakambani Maviri Seti